remove – Zulu Translation – Keybot Dictionary
Keybot 13 Results 5 Domains
4 Hits www.google.fr
Compare text pagesCompare HTM pagesOpen source URLOpen target URLDefine google.fr as primary domain
Sihlale njalo siguqula futhi sithuthukisa izinhlelo zethu. Kungenzeka sengeze noma sisuse izinto ezithize eziyingxenye futhi kungenzeka simise uhlelo okwesikhashana noma unomphela.
Lapho khona singahlinzeka imininingwane ukufinyielela kanye nokulungisa, sizokwenza lokho mahhala, ngaphandle uma kudinga umzamo omkhulu ngokweqile. Sizimisele ukugcina uhlelo lwethu ngendlela evikela imininingwane ekulimaleni okwenzeke ngephutha noma ngamabomu. Ngenxa yalokhu, emva kokuba usususe imininingwane ohlelweni lwethu, ngeke sikwazi ukususa ngokushesha amakhophi asalile kuma-server ethu asebenzayo kanti ngeke sisuse imininingwane ezinhlelweni zethu zokugcina izipele.
5 Hits www.google.cn
Compare text pagesCompare HTM pagesOpen source URLOpen target URLDefine google.cn as primary domain
Compare text pagesCompare HTM pagesOpen source URLOpen target URLDefine maps.google.no as primary domain